"Cardio high-tech" ho an'ny fatiantoka
Ny fampiofanana "Cardio high-tech" dia noforonin'i Olga Vyazmetinova - tompondaka erantany amin'ny fitondrantena bikini. Ny tovovavy, mifantoka amin'ny traikefa niainany, dia namorona sarotra iray izay haingana dia haingana mavesatra ary, indrindra indrindra, ny fihazonana ny elasticité ny hoditra. Ny zavatra mahafinaritra indrindra ho an'ny maro dia ny faharetan'ny fampiofanana amin'ny fahaverezan'ny lanja "Cardio high-tech", satria mila 7 minitra monja, fa isan'andro. Ny tompon-tany dia milaza fa amin'ny 14 andro dia azonao atao ny miala lavitry ny dimy fanampiny.
Gymnastics "Cardio high-tech"
Alohan'ny handehanako mivantana ny trano dia tiako ny hiteny momba ny fanoherana, tsy azo atao ny manao fampiharana ho an'ny olona manana aretim-po, ra, fanoherana ary aretina mitaiza. Ny tsirairay amin'ireo fampiharana etsy ambany dia tokony atao mandritra ny iray minitra, fa tsy manadino ny mampiato azy ireo, maharitra 30 segondra.
Fanabeazana Cardio High-Tech:
Ampifanaraho amin'ny tongotra ny tongotrao, ampidino kely ny lohalika. Manaova fanatanjaham-pihetseham-po miaraka amin'ny fiakaran'ny lohalika avo, tsy manala ny tongotrao. Zava-dehibe iray hafa koa dia ny hoe tokony ho eo an-tampon'ny loha ny aoriana.
Mitsangàna mahitsy ary atsipazo eo anoloanao ny sandrinao, ary apetraho eo amin'ny soroka izy ireo. Ny tanjona - Ataovy ireo fanafihana ao amin'ny andaniny, tongotra miova. Mitandrema fa tsy mitsahatra ny vatany.
PI toy ny tamin'ny fampiharana voalohany. Ny asa - mihazakazaka eny amin'ny toerana, manao dingana kely. Miezaha hanatratra tanjaka ambony. Taorian'ny 15 segondra. Mivilia havia raha tsy mijanona ny hazakazaka, ary avereno aty amin'ny toerana voalohany ary avereno ao amin'ny lalana hafa.
IP toy ny teo aloha. Ny tanjona - alao sary an-tsaina fa miparitaka ny zavatra samihafa ao amin'ny gorodona, izay tsy maintsy angonina, hampidiriny amin'ny toerana iray. Hery hafa: ny iray manangona, ary ny hafa mitazona ny fehikibo.
Mipetraha eo anelanelan'ny tongotrao miaraka amin'ny tananao. Ny tanjona dia ny mitsambikina , manangana ny tananao avo araka izay azo atao.
Fanaovam-pomba amin'ny vehivavy
Callanetics - fanatanjahan-tena
Fitsipika fitondran-tena ao amin'ny dobo
Power simulators ho an'ny trano
Daria Lisichkina - fampihorohoroana matavy
Ahoana no ahazoana menaka amin'ny hoditra marina?
Manazava i Kara Delevin mikasika ny fanorisorenana ara-nofo an'i Harvey Weinstein
Ny tahan'ny BIO ho an'ny fahavoazana
Fetin'ny rongony mariazy
Fofona main'ny urine amin'ny zaza
Ireo zoro any Isiraely
Fitafy ankamantatra ho an'ny 2015-2016
Lapan'i Yusupov ao Crimea
Kate Ledger dia namaly ny tsy fahafaliam-pihetseham-po tamin'ilay sarimihetsika "Heath Ledger aho"
Ny fomba atao batisa ao amin'ny fiangonana - ny fitsipika
Karazan'akanjo maoderina ho an'ny vehivavy
Sharon Osborne nandao ny fisaraham-panambadiana: ny vadiny dia nanindry ny fanintelony tamin'ny stylist malaza!
Famolavolana ADSM - inona io?
Vavaka ho an'ny Cyprian avy amin'ny filalaovana ody